↑ The Afghans - Their History and Culture။ Center for Applied Linguistics (June 30, 2002)။ 17 March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-09-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Griffin၊ Luke (January 14, 2002)။ The Pre-Islamic Period။ Afghanistan Country Study။ Illinois Institute of Technology။3November 2001 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-10-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ D. Balland (2010)။ "AFGHANISTAN x. Political History"။ Encyclopædia Iranica (Encyclopædia Iranica Online ed.)။ Columbia University။
↑ M. Longworth Dames, G. Morgenstierne, and R. Ghirshman (1999)။ "AFGHĀNISTĀN"။ Encyclopaedia of Islam (CD-ROM Edition v. 1.0 ed.)။ Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Western Powers and the Great Game။ Center for Applied Linguistics (June 30, 2002)။ 17 March 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-10-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ State of the Insurgency Trends, Intentions and Objectives။ International Security Assistance Force။ DefenseStudies.org (December 22, 2009)။4July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ&oldid=627168" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။